डेंगु फैलाउने लामखुट्टेको खतरानक दुई वटै भाइरस पोखरामा – Tandav News
डेंगु फैलाउने लामखुट्टेको खतरानक दुई वटै भाइरस पोखरामा
कस्ता लक्षण देखिन्छन् ? कसरी बच्ने ?
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ भाद्र १८ गते बुधबार १६:४७ मा प्रकाशित
पोखरामा डेंगुको संक्रमण दर नियन्त्रण भन्दा बाहिर नै छ । कास्की सहित देशका ४० वटा भन्दा धेरै जिल्लामा डेंगुको संक्रमण फैलिएको छ । पोखरामा डेंंगु फैलाउन सक्रिय लामखुट्टे एजिप्ट एजिप्टआईको दुबै प्रजाती सक्रिय रहेको गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक रमेश प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘डेंगु सार्ने एडिस एजिप्टआई लामखुट्टे पोखरामा सक्रिय छ । यसको नेपाली नामाकरण टाइगर मस्क्यूटो राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो लामखुट्टे अरु भन्दा फरक छ । यो लामखुट्टेले बाघले जसरी नै एक्कासी आएर टोक्ने, एउटालाई टोकेपछि अर्काे,अर्काेलाई टोक्दै जाने गर्छ । अरु लामखुट्टेहरु एकपटक टोकेर रगत चुसेपछि अरुलाई टोक्दै हिँड्दैन ।’ डेंगु एडिस एजेप्टाई र एडिस एल्वौपेक्टस नामक लामखुट्टेले टोकेर हुने तीब्र भाइरल संक्रमण हो ।
गण्डकी प्रदेशको ११ जिल्ला मध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेक सबै जिल्लामा यसको संक्रमण रहेको आशंका गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको कास्की, स्याङ्जा, नवरपरासीमा यसको संक्रमण भएका विरामी भेटिइसकेका छन् । कास्की सबैभन्दा जोखिममा छ ।
कास्कीमा डेंगुको संक्रम हुनेहरुको संख्या ५०० पुगिसकेको छ । कास्कीका १७ जना ट्राफिक प्रहरीलाई यसको संक्रमण भइसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । उनीहरु उपचाररत छन् । पोखरामहानगरका ८ र ९ वडा उच्च जोखिममा छन् । अन्य वडाहरूमा पनि यसको संक्रमण भएको भेटिएका छन् । पोखरामा डेंगुको लागि सबैभन्दा जोखिम मानिएको क्षेत्र पृथ्वीचोक आसपास ट्राफिक ब्यवस्थापनमा खटिने ट्राफिकहरुमा डेंगुको संक्रमण देखिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख मुरारी मिश्रले जानकारी दिए । प्रहरीले आन्तरिक शिविर गरेर डेंगुको परिक्षण समेत गरिसकेको छ ।
गाडीका थोत्रा टायर, कवाडी सामानको संकलन केन्द्र, पानी जम्ने खाल्डा, घर वरपरका झाडीका कारण डेंगु सार्ने लामखुट्टे फैलिएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
– ढाड, जोर्नी तथा मांसापेशिहरू दुख्ने
– शरीरमा विमिरा आउने
यस्तो छ बच्ने उपाय
– डेंगु ज्वरोबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुका साथै लामखुट्टेको वृद्धि रोक्नु पर्छ ।
– पानी जम्न सक्ने भाँडाहरू जस्तै गमला, फुलदान, खाली बट्टा, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, गाडीका काम नलाग्ने टायरहरू आदिमा पानी जम्न नदिने
– पानीको ट्याङ्किलाई लामखुट्टे प्रवेश गर्न नदिने गरि छोपेर राख्ने
– कुलरमा रहेको पानीमा प्रत्येक हप्ता एक दुई चम्चा मट्टितेल हालिदिने साथै जम्मा भएको पानी सफा गर्ने
– फुलदानिमा रहेको पानी हप्तामा दुई पटक फेर्ने
– यस लामखुट्टेले दिउँसो टोक्ने हुँदा दिउँसो बस्दा बाहुला भएको वा शरिर ढाकिने लुगा लगाउनुपर्छ
– सम्भव भएसम्म दिउँसो सुत्दा पनि झुल प्रयोग गर्नु पर्छ, साथै साना केटाकेटिलार्य जुनसुकै समयमा पनि झुल भित्र सुताउनु पर्दछ ।
– लमखुट्टेको टोकाइबाट बच्न लामखुट्टे भगाउने मलहम दल्न पनि सकिन्छ।
– घरका झ्याल ढोकामा जाली लगाउनु उपयुक्त हुन्छ
– घर वरिपरि सफा सुग्घर राख्ने, पानी जम्ने खाल्टा खुल्टी पुर्ने गर्नु पर्छ ।
लोकसेवाको आवेदन दिनेको संख्या वृद्धि,हालसम्म एक लाख १८ हजार